हामी देशभक्त तथा राष्ट्रवादी शक्ति हौं -डा.जयवन्त विक्रम शाह - Yugantar Khabar | News Portal
Posted on August 13, 2021 by Basanta Pariyar
डा.जयवन्त विक्रम शाह (जवि) पुराना वामपन्थी चिन्तक तथा राजनीतिककर्मी हुन् । २०३७ सालदेखि नेकपा चौमबाट राजनीति सुरु गरेका उनी आजको दिनमा भने फरक राजनीतिक धारमा रहेका छन् । कम्युनिष्ट धार त्यागिसकेको बताउने उनी आफु देशभक्त र राष्ट्रवादी भएको बताउछन् । गोरखामा जन्मे हुर्केका, पोखरामा अध्ययन र राजनीतिक तथा कर्मथलो कपिलवस्तु जिल्ला रहेको छ । निर्मल लामा, मोहनविक्रम सिंह, भक्तबहादुर श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी, मोहन वैद्य, प्रचण्ड, बाबुराम र सिपीसम्मसंगत गरेका उनले सिपी गजुरेलबाट पार्टीका सदस्यता लिएका हुन् । मोहन वैद्य र सिपी गजुरेलले नै राजनीतिक संगठन गर्न कपिलवस्तु पठाएको समेत सुनाए । त्यतिबेलासम्म मोहन वैद्यले नेकपा मसाल (२०४१) बनाईसकेका थिए । त्यतिबेलैदेखि म कपिलवस्तु खटाईएको थियो । त्यसरी त्यो बेलादेखि आजसम्म निरन्तर राजनीतिक कर्मथलो बनाईरहेको छु । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विभिन्न उतारचढावको निरन्तर साक्षी रहेको छु । तर मैले जहिले पनि क्रान्तिकारी लाईनमै साथ दिंदै आएं । ०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध गर्ने बेलासम्म आईपुग्दा म जनयुद्धकै पक्षमा उभिए ।माओवादी जनयुद्धमा ०५८ सालसम्म आईपुग्दा माओवादीको वैचारिक पक्ष भन्दा फरक ढंगले हिंड्न थालेपछि मलाई मन परिरहेको थिएन । माओवादी जनयुद्धउत्कर्षमा पुगिरहेको बेला विद्रोह गर्ने अवस्था पनि थिएन । माओवादी जनयुद्धमा लुम्बिनी अञ्चलको इञ्चार्ज बनाईनुको साथै स्वास्थ्य, साँस्कृतिक र सुकुम्वासी मोर्चाको जिम्मेवारी समेत दिईएको थियो । त्यही समय भारतको लखनउमा बसेर समेत पार्टीको लामो समय काम गरें । पार्टीमा काम गर्ने क्रममा धेरै असन्तुष्टिहरु थिए । त्यति नै बेला मेरो मनमा केही नयाँ राजनीतिक विचार वा दर्शन जन्माउनु पर्छ भन्ने सोच थिंदै थियो । अध्ययन गर्दै जाँदा नेपालवाद, नेपालीतन्त्र र नेपाली राष्ट्रवाद भन्ने राजनीति दर्शन जन्माएं । र आर्थिक योजना हामीले नेपाल कृृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिमा आधारित आर्थिक प्रणाली हुनपर्छ भनेका छौं । पञ्चायत तथा राजाकालसम्म पनि नेपाल कृषिमा आत्म निर्भर थियो । बेलायत तथा विभिन्न देशमाअन्नपात पठाईन्थ्यो । त्यो पुरानो कुषि प्रणालीलाई भत्काईएकाले आज अर्बौ व्यापार तथा बजेट घाटा हुनुको साथै परनिर्भर हुनु परेको छ । जुन दर्शन जन्माउन मलाई दशौं वर्ष लाग्यो । देश आज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र कुटनीतिक इत्यादि रुपमा कमजोर अवस्था रहेको छ । जुन राजनीतिक दर्शन र आर्थिक प्रणाली गलत भएकाले देशको यो अवस्था देखा परेको हो । अब यो देशमा सहि राजनीतिक दर्शन र आर्थिक प्रणाली हाम्रो पार्टीको मात्र हो । त्यसैले हामी निरन्तर जनतामा गईरहेका छौं । जनताले विस्वास गर्ने वातावरण बन्दै गईरहेको छ, बनाईरहेका छौं । ०६४ मा शान्ति प्रक्रियासम्म आईपुग्दा माओवादी आन्दोलनसंग मेरो धेरै विमत्ति रहे । त्यसरी समसामयिक राजनीतिक दर्शन बनाएरअघि बढिरेका छौं । वास्तवमा माओवादी जनवादी धार छाडेर बाबुराम भट्टराईको लोकतान्त्रिक धारमा जाने निर्णयसंगै माओवादी कमजोर भईसकेको थियो । त्यसपछि १२ बुंदे हुंदै आज देशमा जुन राजनीतिक धार बनेको छ, त्यो बाबुरामकै लाईन हो । जहाँकि माओवादीले जित्ने अवस्था हुंदाहुंदै पनि आत्माघाती निर्णय माओवादीले ग¥यो । तर माओवादी पार्टी गलत कार्यदिसा पारित गरेर शान्ति प्रक्रियामा आए । कार्यदिसा नै गलत भएपछि सफल हुने कुरै थिएन । जसको कारणले आज माओवादीको अवस्था र ढुलमुले नितीले देखिएकै छ । जुन मैले पहिल्यै बुझिसकेको थिए र पार्टी गलत भयो पनि भने, तर सुनेनन् । त्यसरी म माओवादी रहिरहने अवस्था रहेन । र कम्युनिष्ट आन्दोलनसंग नै कुनै विस्वास नभईसकेपछि म पुरै देशभक्ति र राष्ट्रवादी धारमा लागें, लागिरहेको छु ।
नेपालमा खासमा कम्युनिष्ट पार्टी सफल कि असफल ?
तपाईले राम्रो प्रश्न गर्नु भयो । सफल थिए भने म पनि कम्युनिष्ट नै हुंन्थे नि । सबै भन्दा पहिले कम्युनिष्ट को हुन् र कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे बुक्ष्न आवश्यक छ । कम्युनिष्टहरु सर्वहारा, देश र जनताको हित एवं कल्याणमा समर्पित गर्नुपर्छ । इश्वर र आत्मा मान्नु हुँदैन नाष्तिक हुनुपर्छ । अर्को कम्युनिष्टले आदर्शका कुरा गर्नुहुंदैन ।उपल्लो वर्गसंग घृणा हुनुपर्छ, ति वर्ग दुस्मन हुन् भन्ने कुरा बुक्ष्नु पर्दछ । कम्युनिष्ट सम्झौता हिन हुनुपर्छ अन्तिम जित नभएसम्म । अर्को महत्वपूर्ण कम्युनिष्टले नाफा खानु हुँदैन, ब्याज लिनु र दिनु हुंदैन । त्यसैले कार्लमाक्र्सले अतिरित्त पूंजीको सिद्धान्त नै बनाएका थिए । धर्म नमान्ने अथवा धर्म अफिम हो । मुख्यतः यी बुंदाहरुलाई कम्युनिष्टहरु दुरुपयोग र आफ्नो आदर्शबाट च्युत भएपछि आज कम्युनिष्टहरुको यो अवस्था आएको हो । अथवा असफल भएका हुन् । यिनै कुराहरुको मध्यनजर गर्दै नयाँ राजनीतिक दर्शन प्रतिपादन गरि नयाँ विकल्प सहितको नेपाली राजनीतिमा नेपाली मौलिकपनको राजनीतिक एजेण्डा सहित अघि बढिरेका छौं । हाम्रो यस दर्शनले अवश्य जित्ने छ, प्राण छउञ्जेलसम्म हामी निरन्तर लाग्छौं ।
देशभक्त र राष्ट्रवादी हुं भन्दै आउनुभएको छ, तपाई राजावादी र हिन्दुवादी त होईन नि ?
हामी राजावादी र हिन्दुवादी दुवै होईनौ । हामी देशभक्त रराष्ट्रवादी हौं । हामी सबै खाले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चाहन्छांै । त्यसैले हाम्रो पार्टी नाम नै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल राखेका हौं । हामी संघीयता विराधी हुनुको साथै देशमा आवश्यक छैन भन्दै आएका छौं । आखिर काम पनि रहेनछ, देखिहालियो नि । स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरण गरि संघीयता खारेज गर्नुपर्छ । अहिलेको स्थानीय तह जुन अधिकार सम्पन्न रहेको छ, त्यो ठीक छ । हामी केन्द्र सरकार र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं ।
वर्तमान राजनीति कस्तो लागिरहेको छ ?
अहिलेको राजनीति नैतिकताको अभाव भएकाले अहिले भांडभैलो देखिएको छ । यत्रो राजनीतिक परिवर्तनबाट देशमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आएको भनिए पनि प्रमादेशबाट सरकार गठन हुनुदुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । यसले नेपाली राजनीतिलाई कमजोर बनाउनुको साथै नजिर र अस्थिर राजनीतिको सुरुवात गरेको छ । गणतन्त्रका लागि सुरुवातदेखि नै लागियो । हामी सधैं गणतन्त्रको पक्षमा रहंन्छौ । अर्को दलिय व्यवस्थाको पक्षमा हामी रहेका छौं । जसले राजनीतिक स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यसैले हामी दलिय व्यवस्थालाई मान्छांै । नराम्रो कुराहरुबाट मुक्ति दिलाउने संघीयता र विदेशी हस्तक्ष्ेप अन्त्य गर्ने पार्टीको महत्वपूर्ण योजना रहेको छ । समग्र र पूर्ण रुपले विसंगतिहरुको निर्मल पार्ने बाटोमा रहेका छौं । नेपाललाई बाह्य औपनिवेशिक, नवऔपनिवेशिकतामा, विस्तारवाद, प्रभुत्ववाद, हस्तक्षेप र षड्यन्त्रहरु पूर्ण एवं समग्ररुपमा मुक्ति दिने र दिलाउन राष्ट्रिय स्तरमा मुक्ति आन्दोलन चलाउनुपर्छ भन्ने हो, त्यहि प्रयासमा छौं हामी । यसका लागि हामीले सबै नेपाली जनता, महिला, युवा, मजदुर, सुकुम्वासी र साँस्कृतिक पक्ष सबै मिलेर नेपालको पुनर्जागरण अभियान चलाउदै आएका छौं । हामी निरन्तर धरपकट, जेलनेल भोग्दै आएको छौं । नेपालवाद, नेपालीतन्त्रवाद र नेपाली राष्ट्रवाद मुक्ति हाम्रो राजनीतिक मौलिक दर्शन हो ।
एमसिसिबारे राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालको धारणा के हो ?
एमसिसि नेपालको हस्तक्षेपकारी रहेको छ । त्यसैले नेपालको हितमा छैन । हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र सम्प्रभुताको हस्तक्षेप गर्छ । एमसिसिको १४ वटा बुंदा पुरै खारेज हुनुपर्छ । जुन नेपाल हितमा छैन किनकि नेपालको संविधान भन्दामाथि रहेको छ । अर्को एमसिसि आइपीएससंग जोडिएको हुनाले यो सैन्य संरचनासंग सम्वन्धित छ । जसले रसिया, अफगानिस्तान, सिरिया, इराक, लिविया जस्ता देशमा यहि सैन्य संरचनाले द्धन्द्ध जन्माएको हो । हामीले विकल्प सहितको विरोध गरिरहेका छौं । नेपाली हितको बुंदा राखेर एमसिसि पास गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान भन्दामाथि एमसिसि हुनुभएन । त्यसैले हामीले एमसिसि विरोधी मोर्चा नारायण शर्माको नेतृत्वमा मोहन वैद्य र विप्लव सहितको ६÷७ वटा दलहरु मिलेर विरोध गरिरहेका छौं ।हामी शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीकोे पक्षमा रहंदै आएका छौं । अर्को हाम्रो महत्वपूर्ण पक्ष न्याय संगत समावेशी सहभागिता धर्म संस्कृति, भाषाभाषी, जातजाति, वर्ण, लिङ्ग, पेशा व्यवसाय वर्ग र दुर्गम क्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै सबैको अधिकारलाई सुनिस्चित गर्नुपर्दछ । यो नै नेपालको शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो ।
नेपालवाद, नेपालीतन्त्रवाद र नेपाली राष्ट्रवादबारे
छोटकरीमा बताईदिनोस न ?
हाम्रो पार्टीको मुल दर्शन जसलाई हामीले लामो समय अध्ययन अनुसञ्धान गरि नेपाली समक्ष ल्याइएका हौं । जुन नेपाली विचार धारा हो, मौलिकपन हो । नेपालवाद –आत्मियता, सम्वनय, ऐतिहासिकता, संघर्ष र भौतिकताको व्याख्या गरेका छौं । नेपालीतन्त्र–नेपालीले नेपालकै लागि नेपालको सर्वोत्तम हित हुने गरी नेपाली स्वामित्व र अपनत्व हुने गरी तल्लो उत्पीडित वर्गलाई प्राथमिकता दिदै नयाँ ढंगले राज्य सञ्चालन गर्ने नतिी र विधि नै नेपाली तन्त्र हो । नेपाली राष्ट्रवाद–नेपालको माटोलाई मुटुबाटै माया गरेर नेपाल रनेपालीको सर्वाङगीण हितमा कुरा र काम गर्ने सामूहिक भावना बोली शैली र व्यवहार नै नेपाली राष्ट्रवाद हो ।
(राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका अध्यक्ष शाहसंग कुराकानीमा आधारित)